प्रकार र हेयरड्रेसि sc क्यान्सरको प्रयोगहरू - समाचार - रुआन डायर ब्यूटी एपलियान सीएलडी ..
प्रकार र हेयरड्रेसि sc कैंचीको प्रयोगहरू
१. दाँतको घनत्व
सामान्यतया, दाँतहरूको संख्या २ and र between० बीचमा हुन्छ (सब भन्दा धेरै प्रयोग हुने प्रकार)। दाँतको संख्या कपालको प्रतिशत हो जुन काट्दा काटिन सकिन्छ। अर्को शब्दमा, teeth 35 दाँत कैंचीको जोडीले कपाल about%% ले पातलो गर्न सक्छ, र यस्तै।
२ दाँतको आकार
दाँतको आकारले ट्रिमिंग पछि केश संरचनाको निर्धारण गर्दछ। सामान्य दाँत सपाट, भि-आकार र यू-आकारको छन्। समतल मुख एक अपेक्षाकृत प्रारम्भिक डिजाइन हो, किनकि कपाल खोल्दा र बन्द हुँदा दाँतबाट कपाल टाढा सर्नेछ, त्यसैले पातलो अनुपात मापदण्डसम्म हुँदैन। भि-आकारको मुख र यू-आकारको मुखको खरोंचहरूमा ग्रूभहरू छन्, जसले कपालमा समानुपातिक कपाल ठीक गर्न सक्दछ। अन्य ब्लेडले कपालमा कपाल काट्छ, र निशानको बाहिरका कपालहरूले यसलाई प्राकृतिक रूपमा टाढा जान दिन्छ। यी दुई प्रकारका दाँतका धेरै प्रयोगहरू छन्, र अधिक प्राकृतिक प्रभाव प्राप्त गर्न शीर्ष र बैंग्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन प्राकृतिक काँटाई विधिको आवश्यकताहरू अनुकूल गर्न सक्छ।
Teeth. दाँतको चौडाई
सामान्यतया, दाँतको चौडाई १-१.२mnm (राम्रो दाँत) हो, र खालमा केवल १-२ कपाल मात्र हुन्छ। तर केही विशेष डिजाइनहरूका लागि, दाँत मुखको चौडाई -5-mm मिमी (बाक्लो दाँत) छ, ग्रु position स्थिति 5-१० कपालहरू समेट्न सक्छ, र दाँतहरूको संख्या -14-१-14 जति कम छ। यी दाँत कात्तीहरू केहि विशेष केश संरचनाको लागि विशेष डिजाइन गरिएको हो। भद्दा दाँत काँचाको प्रयोगले मध्यम र छोटो केश शैलीको शीर्ष आकार लामो र छोटो मिश्रित तहहरूको एक धेरै मजबूत भावनामा पुग्न सक्छ।
Teeth. दाँत र द्विपक्षीय दाँत उल्टो
जब दाहिने हातको साथ कैंची समात्नुहुन्छ, कैंची दाँत औंठीले औंलाले समातेको ब्लेडमा अवस्थित हुन्छ, र उल्टो दाँत कात्री यसको विपरित हुन्छ। कैंची दाँत औंलाले समातेको ब्लेडमा अवस्थित हुन्छ, जब ब्लेड खोल्छ, रिवर्स दाँत कात्रीको सिंची दाँत माथि छ र ब्लेड तल छ। द्विपक्षीय दाँत कात्रीको दुई काट्ने किनाराहरू दुबै काटिरहेका छन्। यी दुई प्रकारको कैंची डिजाईनको मुख्य उद्देश्य कपाल पातलो हुँदा काट्ने रेखा कम गर्नु हो। उदाहरण को लागी, टाउकोको दुबै पक्षहरु वा दिमागको पछाडिको भागबाट केहि लेयर भएको कपाल निकाल्नुहोस्, ओर्थोडोन्टिक दाँतले काट्नुहोस् र कपाल तान्नुहोस्। तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ कि काटि the्ग पार्टमा बिन्दु रेखा छ, जुन ब्लेड माथि देखि तलसम्म बनिन्छ। जे होस्, काउन्टर दाँत दाँत काँचाको ब्लेडको तल्लो सतहमा कपालहरूले ट्यान्जेन्ट रेखा देखाउँदैन। किनभने त्यहाँ द्विपक्षीय कैंचीमा कुनै ब्लेड छैन, माथिल्लो र तल्लो भागहरू ट्यान्जेन्ट देखाउँदैन। तर किनभने दाँत अगाडि एक अर्को संग टकराउँदछ, यो क्षति गर्न सजिलो छ। यी दुई प्रकारका कैंचीहरू छोटो कपाल कोशिसिको दुबै पक्ष पातलो पार्न र दुबै पक्ष र मध्यम छोटो कपाल स्टाइलको पछाडि मस्तिष्क स्थिति ट्रिमिंगका लागि उपयुक्त हुन्छ।
अर्को:हातमा हातले भेडा कपाल गर्न सिकाउँछ